Sinnaanta Helitaanka Caalamiga - Guddi
Fatima Askira waa xubintayada cusub ee Golaha. Waxay u keentaa khibradeeda dhisida nabadda iyo dhalinyarada iyo khibradaha haweenka ee Nigeria ee EAI.
Mary Beth Garber waxay xubin ka ahayd guddiga EAI ilaa 2006. Waxay ku keentaa khibradeeda ballaaran ee raadiyaha, telefishanka, iyo qaybaha isbedelka bulshada.
Maryan Beth Garber
Sida aasaasaha iyo maamulaha hore & Madaxweynahii hore, doorka Ronni Goldfarb ee Golaha wuxuu ku saleysan yahay aqoon ballaaran oo gacan ka geysaneysa kobcitaanka EAI.
Aasaasaha, Maamulaha guddiga
Carla Koppell waxay u keentaa aragti muhiim ah dhismaha nabadda iyo khibradda istiraatiijiyadda sinnaanta jinsiga Guddiga Sare ee Agaasimayaasha EAI.
Xubin ka tirsan Golaha oo la shaqeeya EAI ilaa iyo Maajo ee 2016, Harini Krishnan ayaa xirtay koofiyado badan: hay'adda samafalka ee NGO, u doodaha waxbarashada, muusig Hindi ah oo tababbaran, iyo Wakiilka California ee xisbiga Dimuqraadiga.
Jenn Louie waa ganacsade khibrad u leh hogaaminta sare ee Google iyo Meetup. Waxay fadhiisatay guddiga EAI muddo afar sano ah waxayna u doodaa caddaaladda bulshada iyo u doodista sinnaanta.
Iyada oo toban sano ah khibrad xagga sharciga ah, Saswati Paul wuxuu ku jiray guddiga EAI muddo 14 sano ah. Shaqadeeda, Paul wuxuu taageeray dumarka la dhibaateeyo wuxuuna mataley macaamiil nugul oo raadinaya magangalyo siyaasadeed iyo / ama wajahayo musaafuris.
Gudoomiye kuxigeenka gudiga
Ku biirista guddiga EAI ee Maarso 2019, Dr. San Martin waa fulin xilliyeed leh 30 sano oo waayo-aragnimo ah kana shaqeynaya horumarinta caalamiga ah. Iyadu waa maamule caan ah iyo Madaxweynaha Plan International.
Jim Tobin waa hoggaamiye heersare ah oo ka tirsan Guddiga EAI ee bixiyay tobaneeyo sano oo hagitaan istaraatiijiyadeed iyo hal-abuurnimo u leh ururka.
Christopher R. Wolf wuxuu ku biiray guddiga 'EAI Board' sanadkii 2014. Wuxuu yahay Gudoomiyaha Ururka Diiwaangelinta Bulshada iyo xubin ka ah Mu'asasada Diiwaangelinta Bulshada. Wolf waa maal-gashi gaar ah iyo lataliye.